ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: January 2011
ဆရာမ ခင်ခင်ထူးရဲ့ “အညာသူ အညာသား ကျမဆွေမျိုးများ” စာအုပ်ဖတ်ပြီး အတုခိုးတယ်ပဲဆိုဆို ဘာပဲဆိုဆို ကျနော်လည်း ရေးစရာဘာမှမရှိတော့ အောက်သူအောက်သား ကျနော့်ဆွေမျိုးများ ရေးကြည့်ပါအုံးမယ် ဇတ်ကတော့ တော်တော် ရှည်မယ့် အဖြစ် ဒါပေမယ့် အကျဉ်းချုံးကြည့်ပါမယ်း) ။ ကျနော်က သံလွင်မြစ်ကို ထက်ဝက်ပိုင်းမယ်ဆိုရင် ဒီဘက်တစ်ခြမ်းမြို့ပေါ့ စစ်တောင်းမြစ် နဖူး ရန်ကုန်ဘက်က လာမယ်ဆိုရင်တော့ မွန်ပြည်နယ်ဝင်ဝင်ချင်းမြို့လေးဟာ ကျနော်တို့မြို့လေးပါ မွန်ပြည်နယ်ဆိုပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့ မွေးရပ်မြေလေးမှာ ကျနော် မွန်တွေကိုမမြင်ဖူးပါဘူး ကျနော်တို့မြို့မှာ ဗမာက 60 % ဆိုရင် ကရင်က 40% လောက်ရှိပါတယ် ။ ကျနော်တို့ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တော့ ၀ဲ တယ်လို့ တစ်ခါမှမထင်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်ဘက်ကလို အပေါ်သားတွေ ကျနော်တို့ အောက်သား စကားနားထောင်တာနဲ့ သိတယ်တဲ့ အသံဝဲလို့ဆိုလား ။ ကျနော်တို့တွေက စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ အလယ်သံကို သံရှည်ဆွဲပြီးပြောတတ်ကြပါတယ် ဥပမာ “မဟုတ်ဘူး ” ဆိုပါဆို့ ဘူး ဆိုတဲ့ အလယ်စကားလုံးရောက်ပြီဆိုရင် ကျနော်တို့က အရှည်ကြီးဆွဲတတ်ပါတယ် ။
စကားပြောရင်လည်း ရိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး ကျနော်တို့က “ အင် ” တွေ ” အေ” တွေ တော်တော်ကို သုံးဖြစ်တယ် ။ ခေါ်လို့ထူးရင်လည်း ခင်ဗျား ၊ ရှင် လို့ ထူးကြတာထပ် “ ဟမ်း ၊ ဟင်း” လို့ပဲထူးတယ် အဲ့အကျင့်က ဒီရောက်တော့ တော်တော်ပြင်ရပါတယ် ။ ရွာမှာတုန်းက တောထဲမှာကျ အမေက မှာထားတယ် မောင်နှမတွေ လူကွဲသွားရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နာမည်မခေါ်ကြနဲ့တဲ့ သရဲတွေ မကောင်းဆိုးဝါးတွေက လူယောင်ဆောင်ပြီး ခေါ်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့ ကျနော် တို့ရွာတွေဘက်က တောသားတွေက တောထဲ ထင်းခွေ နွားကျောင်း ကြရင် တအူအူ နဲ့ အသံတွေ အချက်ပေးလို့ တောက အဲ့အကျင့်က မြို့ရောက်တော့ ခက်တာပါပဲ ကျနော့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က ခေါ်လိုက်ရင် ဗျာ လို့မထူးမိပဲ အူးအူး လို့ ထူးမိတာကြောင့်ပါ ။
ကျနော်က အဖေ (အဘ)ကရင် အမေ ဗမာစပ်ပါ ကိုယ့်ဆွေမျိုးအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် မွေးသဖခင်ဘက်က စရမယ် ဒါမယ့် အဘတို့ဘက်ကအမျိုးတွေက ကရင်တွေပီပီ စကားနည်းပြီး အခေါ်အပြောနည်းကြပါတယ် အမေတို့ရွာမှာပဲ ကျနော်တို့တွေ အခြေချတာဆိုတော့ ကျနော်တို့တွေက အဘအမျိုးတွေနဲ့စိမ်းတာပေါ့ အဘရဲ့ အဖွားမဆုံးခင်တုန်းကတော့ ရွာနီးနားစပ်က အမျိုးတွေက နှစ်တိုင်းလိုလို ကျနော်တို့ရဲ့ အဘွားကို သွားသွားကန်တော့ကြပါတယ် အဲ့တာဆို လှည်းတန်းကြီးက အရှည်ကြီးနဲ့ ဧည့်သည်တွေဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ခလေးတွေကို အမျိုးတွေက သိပ်ဂရုစိုက်တာ မရမ်းသီးတွေတက်ခူး လူင်္ကြီးတွေကတော့ ရေဇလုံတွေထဲ တောအရက်တွေထည့်ဖျော် သီချင်းတွေဆိုကြ ကကြနဲ့ အဲ့အဘွားကို သွားကန်တော့တဲ့ရက်ရောက်တိုင်း ကျနော်တို့တွေ အရမ်းပျော်ကြပါတယ် အဘွားဆုံးတော့ အဘဘက်ကအမျိုးတွေနဲ့တောင် မဆုံတာကြာပါပြီး အဘ ဘက်က အမျိုးတွေက စကားပြောပုံကတစ်မျိုး “ လေ ” နောက်ဆုံးစကားလုံးမှာ ထည့်ပြောတတ်ပါတယ် ဥပမာ “ မဟုတ်ဘူးလေ ” ၊ “ဟုတ်တယ်လေ ” တလေလေ နဲ့ စကားက၀ဲဝဲ နားထောင်လို့ သိပ်ကောင်းပါတယ် အဘက ကရင်ဖြစ်ပေမယ့် ဗမာတောထဲမှာပဲ နေရတဲ့ ကျနော်တို့မောင်နှမတွေ ကရင်လိုတစ်လုံးမှမတတ်ကြပါး) ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က ကရင်သွေးတစ်ဝက် ။
မာတာမိခင်ဘက် ရောက်ပြီး တော်တော်ရှုပ်မယ့် အမျိုးပါ အမေက နည်းနည်းကုလားသွေးပါတယ်ထင်တယ် ဟီးး ကျနော်တို့ ကုလားလိုရှင်မပြုဘူးနော်း) ။အဖိုးက ဗမာ ၊ အဖွားက ကုလားစပ် ဆိုတော့ ကျနော်တို့ အမေက ဗမာကုလားပေါ့ ဗမာကုလားနဲ့ ကရင်နဲ့ပေါင်းတော့ ကျနော်တို့က ဘာမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူး ။ ကုလားတွေက ခလေးတော်တော်ချစ်ကြတယ်မှတ်လား မွေးလိုက်တဲ့ ခလေး အရင်တုန်းက အဖိုးတစ်ယောက်စာက သားသမီးတွေများလည်း လောက်ငှတာဆိုတော့ အဖွားကတော့ ခလေးမွေးသက်သက်ပေါ့ တကယ်ပါ အမေ တို့ မောင်နှမ ၁၅ ယောက်တောင်ရှိပါတယ် အမေပြောပြတာပဲ အငယ်လေးထဲက ဆုံးသွားတာ ၃ ယောက်ဆိုတော့ လောလောဆယ် အမေ့မောင်နှမက ၁၃ ယောက် ဘယ်လောက်တောင်များ ဆိုးလိုက်တဲ့ ကျနော့်အဖွားလည်းလို့ အမေက သားအကြီးဆုံးကိုယ်ဝန်လေးနဲ့မှာ အဖွားကလည်း အားကျမခံ ဗိုက်ကလေးနဲ့တဲ့ ဖြစ်ပုံက အမေက ဒုတိယမြောက်သမီး ကိုကြီးကိုမွေးပြီး ၃ လလောက်နေမှ အဖွားက ဦးလေး အငယ်ဆုံးကိုမွေးတယ် ၁၅ ယောက်တောင်မွေးလာတာဆိုတော့ သူလည်းနို့ဘယ်ထွက်တော့မတုန်း အဲ့တော့ အမေက သားအကြီးဆုံးကိုလည်းနို့တိုက် မောင်အငယ်ဆုံးကိုလည်း နို့တိုက်ပေါ့ ။ ကျနော့်အစ်ကိုင်္ကြီးက ဦးလေး ကို ဦးလေး လို့ နာမ်စားခေါ်ပေမယ့် စကားပြောပါများတဲ့ အခါကျ မင်းနဲ့ငါပဲဖြစ်ဖြစ်သွားကော အဲ့တာ အဖွားကြောင့် အခေါ်ဝေါ်တွေ ရှုပ်ကုန်တာ ။
နောက်ပြီး ဟာ့စ်ထိတဲ့ နေရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ် အဖိုးက အရင်ကတော့ ကျနော်တို့မြို့မှာ နည်းနည်းနာမည်ကြီးတဲ့ထဲပါတယ်ဆိုလား အင်းး ပြောရရင်တော့ ချမ်းသာတယ်ပေါ့ ချမ်းသာတာကလည်း စိန်ကုန်သည် စက်သူဌေး ဘာညာဆိုတော်သေးတယ်တယ် ခုတော့ ကျွဲ ပါ ။ အဖိုးပိုင်တဲ့ ကျွဲက ရာချီပါတယ်တဲ့ သားသမီးတွေ အိမ်ထောင်ကျရင် အဖိုးက လက်ဖွဲ့အနေနဲ့ ကျွဲတွေ အကောင်၂၀လောက်ပေးပေးလိုက်ပါတယ် (စကားချပ် ။အမေက အဘကို ရန်ဖြစ်တိုင်း စကားနာထိုးတာ သူ့ကိုရတုန်းက အဘက ငွေ ၃၅၀ ပဲပါပြီး အမေ့ဘက်က ကျွဲအကောင် ၂၀ ပါတယ်ဆိုတာပါ ) ။ အဖိုးနာမည်က ဦးချစ် ရှေ့က သူဌေးနာမ်စား ကျွဲတပ်ခေါ်တော့ အဖိုးက ကျနော်တို့အရပ်ဖက်မှာတော့ ကျွဲငချစ် ကျွဲငချစ် နဲ့ နာမည်က မသေသေး ခုထိ ..ဟဲ့..ဒါက ဟိုဒင်းသားဆိုတော့ ကျွဲငချစ်မြေးပေါ့ အဖိုးတို့ခေတ်က လူကြီးပိုင်းတွေက ကျနော်တို့ကိုတွေ့ရင် အဲ့ အဖိုးရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကြီးထည့်ထည့်ပြောတာပါ စိတ်ညစ်ထှာ ..။
နောက်တစ်ခု အခေါ်ဝေါ်တွေက ထပ်ရှုပ်တာပြောပါတယ် ဦးလေးက သူ့အမတွေ အစ်ကိုတွေကို “မမ ” ၊“ကိုလေး” လို့ခေါ်တော့ ဦးလေးနဲ့ သိပ်မကွာကြတဲ့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲတွေ အစ်မ၀မ်းကွဲတွေကလည်း တကယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ အဒေါ်တွေ ဦးလေးတွေကို “ မမ ” ၊ ” ကိုလေး” လိူု့ ခေါ်ကြပြန်ကော ကျနော်တို့အငယ်တွေကလည်း အကြီးတွေ ခေါ်တဲ့အတိုင်း လိုက်ခေါ်တော့ ပြသနာတွေက ရှုပ်လို့ ကိုယ်တွေဆွေမျိုးချင်းခေါ်တာကျ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ဘေးလူတွေက သိပ်နားမလည်သလိုလို “ ဟဲ့... အဲ့တာ နင်တို့အမေ ညီမ မဟုတ်လား ဘယ့်နှဲံ့ မမခေါ်တာလဲ ” အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ကျနော်တို့ ၀မ်းကွဲတွေက အရင်းတွေလို ချစ်ကြပါတယ် ပူးပူးကပ်ကပ်နဲ့မသိရင် အရင်းတွေအတိုင်းပဲ အမ၀မ်းကွဲတွေများတော့ မျက်နှာ ရှိပါတယ် ဟဲဟဲ ။ ကျနော်တို့မြို့က ရွာနာမည်လေးတွေက ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် ကြာဖြူ ၊ ကြာနီ ၊ အောင်သပြေ ၊ ကံကော် ပန်းနာမည်လေးတွေ ။ အဒေါ်တွေ ရွာဘက် သွားလည်ရင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အသီးရွက်တွေနဲ့ ဘူးသီးနဲ့ကြက်သားဟင်း ပူပူစားရပါတယ် ရေခဲရိုက်ကြက်မဟုတ်ပါ အိမ်အောက်က ကြက်ကို လေးခွနဲ့ပစ်ပြီး ချက်ချင်းချက်တာမျိုး ။
ယောက်ဖတွေက ကိုယ်တွေရောက်သွားရင် ရှကီလေးကို ပုန်းလျှိုခွက်လျှိုနဲ့ မော့စရာမလိုတော့ပါဘူး “ ယောက်ဖ သောက်လေး ချကွ ” ဆိုပြီး သူတို့ကြီးမော့နေတော့တာ မူးရင် သွေးဆိုးတဲ့ ယောက်ဖတွေနဲ့ အစ်မတွေ နပန်းသတ်ကြရင် ကျနော့်မှာ မျက်နှာပူလိုက်တာ အမေက “ ဟဲ့ ..နင်တို့ မမ တို့ ရွာကို အလည်သွားလိုက်ပါအုံး ” ဆိုရင် ”တော်ပါပြီဗျာ ကိုယ့်ကြောင့် နပန်းသတ်ပွဲတွေမကြည့်ချင်တော့ဘူး” လို့ပြောတော့ အမေက ပြုံးစိစိ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုချိန်ပြန်စဉ်းစား ကျနော်တို့တွေကို မျက်နှာမငယ်ရလေအောင် ခလေးတွေ စီမံကိန်းနဲ့ မွေးပေးခဲ့တဲ့ အဖွားကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် မွေးရပ်မြေက ရွာတော်တော်များများမှာ ကျနော်တို့အမျိုးတွေရှိတာပေါ့ ဆွေကြီးမျိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူး ဆွေများမျိုးများပါး) ။ နောက်ပြီး အဖိုးလို စည်းကမ်းကြီးပြီး တော်တဲ့ သူမျိုးသာ ကျနော်တို့အရွယ်ရောက်တဲ့ အချိန်ထိ အသက်ရှည်ရှည်နဲ့ နေနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့တွေလည်း အဖိုးရဲ့ အရှိန်လေးတော့ ရှိအုန်းမှာ အဲ့အခါကျ ကျနော်လည်း ကျွဲသူဌေးလေး ငမျိုး ပေါ့ တနည်း ကျွဲငမျိုးပေါ့ဗျာ ။
at 11:35 PM 16 comments
at 4:13 PM9comments
ရေ ဆိုတာ ကြည်လင်တဲ့ အေးမြတဲ့ သဘောပေါ့ ဒါပေမယ့် တွင်းထဲကရေတိုင်းတော့ အမြဲတမ်းကြည်လင်နေနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး သူလည်း တစ်ခါခါတော့ နောက်တတ်မှာပေါ့ ။ ခေါင်းစဉ်ကတော့ တစ်ခြားစီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ခုလတ်လော ကျနော့်၇ဲ့ ခံစားချက်က တွင်းထဲကရေနဲ့ တူနေလို့ပါ တွင်းထဲက ရေထဲ ခဲလုံးကလေးပစ်ချလိုက်ရင် သူ့ရေပြင်လေး လှိုင်းထသွားမှာပေါ့ ဒါပေမယ့် ရေကတော့ မနောက်သွားပါဘူး ။ အင်းး......။ ကျနော်က ပြုံးပြုံးလေး နေတတ်ပါတယ် အလကားနေရင်း အပြုံးတွေဖော်ဖော်သီသီပေးတတ်လို့ မျက်နှာချိုတယ်လို့ အပြောမခံရပဲ မျက်နှာပြောင်တဲ့ သူလို့ သတ်မှတ်ခံရတာပေါ့ ။ ဖတ်ဖူးတဲ့ စာစုလေးတစ်ခု “ ပြုံးတာဟာ ဘာမှမခက်ပါဘူး လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ ပြုံးခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး ပေါင်းကူးတံတားပါ” တဲ့ ကျနော် သိပ်ကြိုက်တဲ့ စာသားလေးပါ ဘယ်လောက်ထိ လည်းဆို မသိပေမယ့် မျက်လုံးချင်းဆုံသွားလိုက်မိတာနဲ့ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းတွေက အလိုလို ကွေးညွှတ်သွားတတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျနော့် အပြုံးမှာ ဘယ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်မှ ကြွေမဆင်းသွားပဲ ကျနော့်ကို ငဘူးကြီးလို့ ထင်ပြီး သူတို့ ပြန်ပေးသွားတာက မျက်စောင်းလှလှလေးတွေပါး) ။။
လူတစ်ယောက်ဟာ အမြဲတမ်းတော့ ဘယ်ကြည်လင်နေနိုင်မလဲနော့် အကြည်ဓာတ်လေးရမှ စကားပြောလို့ကောင်း ကျနော်တို့လို ဘလော့ဂါတွေအဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီအကြည်ဓာတ်က ပိုလိုတာပေါ့ အကြည်ဓာတ်မရှိရင်များ ကုန်ကြမ်းမပြောနဲ့ ကိုယ့်အရှေ့မှာ တစ် နဲ့ တစ်နဲ့ ပေါင်း ဘယ်လောက်ရလဲ အဲ့တာချရေးပါဆိုရင်တောင် ဘာစာမှထွက်မလာတဲ့အမျိုး ကျနော် ခုအဲ့လိုဖြစ်နေတာ“ အချစ်ရဲ့ ဒဏ်ခတ်ခြင်း ” ရေးပြီး လူက အားကုန်သွားပါတယ် ဘလော့ဂါဆိုတာ ကြမ်းပိုး ကို လိပ်ဖြစ်အောင်ရေးတဲ့ အမျိုးဆိုတော့လည်း ကိုယ်တွေ့လေးက ၂ ကျပ်ဖိုးလောက် ကြားဖူးနားဝ ရှိတာလေးက ၅ ကျပ်ဖိုးလောက် ဟိုဟာလေး နည်းနည်းထည့်ထည့် ဒီဟာလေးနည်းနည်းထည့်နဲံ့ ကုန်းရုန်းပြီး ရေးလိုက်မိပါတယ် ကျနော်များ စာရေးမတတ်လေတော့ မောင် လို့ အထင်ခံရပြီး လူမုန်းများသွားလေသလားမသိ တစ်ချို့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အပိုဆုလေးတောင် ပါတာပဲ ယူလိုက်ပေါ့တဲ့ စမှန်းတော့သိပေမယ့် ရေတွင်းထဲ ခဲလုံးကလေး ပစ်ချခံလိုက်ရ လှိုင်းထသွားတယ်။
ခုရက်ပိုင်း အလုပ်ထဲမှာလည်း ဒီတိုင်းပါပဲ တစ်နေ့က စက်ရုံတွေဘက် အလုပ်သွားရင်း စက်ရုံက ခေါင်းဆောင်က ပြောတယ် တစ်ယောက်ချင်းလာမေးတာကို ဖြေနေမယ့် တူတူ လူတွေစုခိုင်းလိုက်ပြီး အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ တစ်ခါတည်းရှင်းပြပေးပါတဲ့ ဟုတ်တာလည်း ဟုတ်ပါတယ် သူ့အတွက် အလုပ်ချိန်မှာ အလုပ်သမားစွမ်းအားတွေကုန်တာပေါ့ သူအတွက်ရှုံးတယ်လို့ဆိုရမယ် မတတ်နိုင်တာ ကျနော်က အသံကျယ်ကျယ်မပြောတတ်တာပါ ကျနော်လည်း ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာကြီး အောင့်အည်းမနေတတ်တဲ့ ကျနော် အသံအကျယ်ကြှီးမပြောတတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ် တကယ်ပါ ကျနော် နည်းနည်းလေး အသံကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်မိတာနဲ့ လည်ပင်းကြောတွေ ထောင်လာသလိုလို ခံစားရတာကြောင့်ပါ အဲ့မှာရလိုက်တဲ့ အမြတ်ကတော့ ကိုယ်ရုံးကိုပြန်မရောက်သေး ဘော့စ်ဆီက အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်ရဲ့ တိုင်တဲ့ဖုန်းက ရောက်နေပါပြီး တော်သေးတာက လုပ်သစ် ၄ နှစ်ကျော်သာရှိလာတယ် ကျနော့် အော်ပြောတဲ့ အသံ ဘော့စ်လည်းမကြားဖူးလေတော့ သူက အဲ့အကြောင်းပြုံးစိစိလေးပြောပေမယ့် ကျနော်အသံကျယ်ကျယ်ပြောတဲ့နေရာမှာ ညံ့တဲ့အတွက် တွင်းထဲကရေ ထဲ ခဲလုံးလေး ပစ်ချခံလိုက်ရသလို ရင်ထဲ လှိုင်းထသွားတယ်။
ဒီနေ့စိတ်မကြည်ဖူးလား အစ်ကို့ မျက်နှာ တင်းနေတယ်တဲ့ အဲ့လောက်တောင် ဟန်မဆောင်တတ်ရမလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် အပြစ်တင်မိပါရဲ့ “ အစ်ကိုလည်း အမြဲတမ်းတော့ ဘယ်ပြုံးနိုင်မလဲ ညီရာ ” လို့ ပြန်ပြောရင်း ကျနော် သူ့ကို လုပ်ပြုံးလေးပြုံးပြလိုက်တယ် ။ အကြည်ဓာတ်တွေ ပျောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်လေသံတွေ မာလာတယ် အကြည်ဓာတ်နည်းတော့ ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေက အမှားများလာတယ် အကြည်ဓာတ်မရှိတော့ ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ချဖို့တောင် လက်တွေက တွန့်ဆုတ်နေတယ် အကြည်ဓာတ်မရှိလိုက်ပုံများ ငှက်ပျော်သီး အခွံနွှာစားဖို့တောင် ပျင်းသလိုလို ကဲ...အပေါင်းသင်းရောင်းရင်းတို့ အကြည်ဓာတ်ရအောင် ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိ လုပ်စမ်းပါအုံး နည်းလမ်းလေး ဘာလေး :P
at 10:19 PM 12 comments
ကျနော့် လား ကိုယ်ကိုယ်ကိုတော့ ဘာမှမသိလိုက်ပါဘူး ဒါမယ့် သူတို့တွေ ပေးတဲ့ လက်ဆောင်စကားလေးတွေနဲ့ ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ ကျနော်ပျော်ပါတယ် ကျေးဇူး အစ်ကိုတင့် ၊ အစ်မ ၊ သူငယ်ချင်းမဲတူး နဲ့ ညီလေး မေပယ်လ် :)
Open publication - Free publishing - More myanmar
၂၅ နှစ်သား သာဆိုတယ်
ကျနော် ဗိုက် အောင့်တုန်း ။
at 9:27 AM 21 comments
မောင်မျိုး မင်းမမှားမီ မေမေမိန့်မှာမယ်။
မောင်မျိုး… မမူးမီ၊ မမေ့မီ… မှတ်မှတ်… မင်းမိန်းမ မော်မော် မြိုးမြိုးမြက်မြက်များ မြင်မှမြင်၊ များမှမြတ်မှမြင်။
မော်မော်မှာ မင်း မောမှာမို့၊ မှားမှာမို့ မမေးမမြန်း၊ မမေးမမြူ။
မင်းမှတ်၊ မောင်မျိုး မှတ်… မေမေ မှာမယ်၊ မိန့်မြွက်မယ်။
မော်မော့်မှာ မောမှမော… မေမြို့မှာ မျောက်များ၊ မြင်းများမွေးမြူ… မြိတ်မှ မဲမဲမှောင်မှောင် မှို၊ မြက်၊ မက်မန်းမျိုးများမှာ… မြောင်းမြမှ မျှစ်၊ မျှော့၊ မြွေ များမှာ… မုန့်မှုန့်မန်၊ မီးမြှိုက်၊ မီးမြှင်း…။
မျောက်များ၊ မြင်းများ၊ မျောက်မွှေး၊ မျောက်မြီး၊ မြင်းမွှေး၊ မြင်းမြီးများ၊ မက်မန်း၊ မှို၊ မျှစ်၊ မျှော့၊ မြွေများ မိုးမမိမီ မြစ်မှ မြန်မြန်မျှော။
မင်းမိန်းမ မော့်မော့်မှာ မြန်မှမြန်… မြင်မှမြင်။
မောင်မျိုး၊ များများမှတ် မင်းမှတ်မှ။ မင်းမှာ မြင့်မြင့်မားမား မြင့်မြင့်မြတ်မြတ် မမှန်း… မိန်းမ မမြင်၊ မှုန်မှုန်မှိုင်းမှိုင်း… မူမမှန်၊ မိုးမမှောင်မီ မြိန့်မြိန့်မူးမယ်၊ မိန်းမမာန်မဲမယ်… မေမေ မျက်မြင်မှမျက်မြင်။
မှားမယ်… မောင်မျိုး မင်းမှားမယ်… မင်း…. မြေမျိုမှာ၊ မင်းမမှားမီ မေမေ မိန့်မှာမယ် မှန်မှန်မြင်… မောင်မျိုး။
at 9:15 PM 12 comments
အဲ့ဒီနေ့..ဟုတ်တယ် အဲ့ဒီနေ့က ကျနော် မ ရဲ့ ဆံနွယ်အရှည်ကြီးတွေကို တမေ့တမော ငေးကြည့်ခဲ့မိတယ် ။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို အကြည့်ချင်းကြာကြာမဆုံရဲတဲ့ ကျနော် မ ဆံပင်တွေကို မသိမသာ ခိုးကြည့်ပြီးတာနဲ့ အကြည့်တွေ ပြန်လွှဲခဲ့တယ် ။ နောက်မှသိလိုက်တာ အဲဒီတုန်းက မ လည်းကျနော်ကို ခိုးခိုးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပါ ဒါဟာ သူနဲ့ကျနော့်ရဲ့ လူမသိသူမသိ တိတ်တဆိတ်ရင်ခုန်ခြင်းပဲထင်ပါ့ ။ “ မောင်...အဲ့နေ့က ရှင် ပန်းရောင်အစင်းလက်ရှည်လေး ၀တ်ထားတယ်နော် ပြီးတော့ ဘောင်းဘီက ဂျင်းနက်ပြာလေး အိပ်ယာထခါစ မျက်လုံးလေးက မို့မို့အစ်အစ်လေးနဲ့ အေးလို့ထင်ပါ့ ကော်ဖီခွက်ကို လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်နေပုံက ခလေးတစ်ယောက်နဲ့တူတယ် ပြီးတော့ မောင့် မျက်နှာလေးကသာ လှတယ်လို့ထင်ရတာ မောင့်ခြေချောင်းတွေက တောသားနဲ့တူတယ်သိလား ခြေချောင်းတွေက ကျဲကျဲနဲ့တော်တော့်ကို အရုပ်ဆိုးတာ ”။ ကျနော်က မ ...ကိုသတိထားမိတာ ဆံပင်တွေပါပဲ ဒါပေမယ့် သူ ကျနော့်ကို သတိထားကြည့်လိုက်တာက ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကျနော် အရှက်သည်းသလိုဖြစ်သွားပေမယ့် ကျေနပ်တယ် မိန်းမတစ်ယောက်ဆီက ဂရုစိုက်ခြင်းတွေ ဖောဖောသီသီရတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်လောက် ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတဲ့ ဖြစ်ခြင်း ဘယ်မှာများရှိနိုင်ပါ့မလဲ ။
“ကျနော့် နာမည် ကောင်လေးမဟုတ်ဘူးဗျ နာမည်ရှိတယ် ပြီးတော့ သား သား လို့ လာမခေါ်နဲ့ ကျနော် ခလေးမဟုတ်ဘူး ” အဲ့လိုပြောတဲ့နေ့က “မ” ရယ်သံလွင့်လွင့်တွေ လေမှာ ပျံ့လွင့်သွားတယ် ။ “မ” မှာ ညိုညက်တဲ့အသားရည် သိပ်လှတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံနဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေရှိတယ် ။ မနက်မနက် အိပ်ယာထပျင်းတဲ့ကျနော် “မ” အိပ်ယာနှိုးမှ ထချင်တော့တယ် အိပ်မှုန်စုန်ဖွားနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ဟလို ဆိုတဲ့ ဖုန်းထူးသံက “မ ”အတွက် မနက်ခင်းတေးဗဒေသာနဲ့ တူပါတယ်တဲ့ ဒါတော့ ခင်ဗျားတစ်ဆိတ်လွန်ပြီထင်တယ်ဗျ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတာပေါ့ ကျနော် အဲ့လောက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ။အချစ်ဆိုတာ ချစ်တယ်လို့ ဖွင့်မပြောခင်အချိန်တည်းက တစ်ယောက်ရဲ့ရင်ထဲ အချစ်တွေရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်စီသိနေနိုင်တဲ့ သံလိုက်တုံးလေးနဲ့တူပါတယ် ကျနော့်တို့ရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ အပ်ချောင်းလေးနဲ့တူတဲ့ နှလုံးသားတွေရှိတာပေါ့ အချစ်ရဲ့ ဆွဲငင်မှုအောက်မှာ ကျနော်တို့ နှလုံးသားတွေ အဖျားတတ်ခဲ့တယ် ။
“မ” ဟာ ကျနော့်အတွက်တော့ ချစ်သူတစ်ယောက်ဆိုတာထပ် ပိုတဲ့ အချစ်တွေ ဂရုစိုက်မှုတွေပေးခဲ့တဲ့သူပါ တစ်ခါခါ မိခင်တစ်ယောက်လို တစ်ခါခါတော့ အစ်မတစ်ယောက်လိုမျိုး ချစ်ခြင်းတွေ ရှိတတ်တယ် ။ ကောင်လေးလို့ ခေါ်တဲ့ သူ့ရဲ့ အခေါ်ဝေါ်ကို ကျနော်က ခပ်တည်တည်နဲ့ ခွင့်ပြုချက်မယူပဲ စကားပြောတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာမ်စားသုံးလိုက်တာက “မောင် ” တဲ့ ။ “ ဒီနေ့ ဘာနဲ့စားလဲ မောင် အစားမာမာတွေစားတော့ ဗိုက်အောင့်နေမှာပေ့ါ အစာအိမ်သိပ်မကောင်းဘူးဆို ထမင်းမစားချင်လည်း နွာနို့လေးတစ်ခွက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်သောက်လိုက်ပါလား ပြီးမှ ဆေးသောက်ပြီး စောစောအိပ်လိုက် မ.. ဒီည ဖုန်းမခေါ်တော့ဘူးနော် မောင်..နားတော့ အင်း အင်း “မောင့်” ကိုချစ်တယ် ။ ဘာအကြောင်းရာမှမဟုတ်ပဲ ကျနော် သူ့ကိုမမူးပဲရစ်ရတာပျော်ပါတယ် အဲ့လိုအခါမျိုးကျ အပြစ်မမြင်ပဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ခွင့်လွှတ်တတ်ပါတယ် ကျနော်လည်း မ..ကိုချစ်ပါတယ်ဗျာ ။ ကျနော် ရှက်လို့ ဖွင့်ပြောတဲ့နေ့က လွဲပြီး ချစ်တယ်လို့ ထပ်မပြောတော့ပါ ကျနော် ချစ်တာ ကျနော်သိရင် ပြီးတာပဲ ။
သူ့ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေက အမြဲတမ်းတော့ ကြည်နူုးဖို့မကောင်းလှပါဘူး “ ဘယ်ကပြန်လာတာလဲ ခုတလော မောင် အပြင်ထွက်တာတွေများနေတယ်နော် မနေ့ကလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားလည်တယ်လို့သာပြောတယ် မ...ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန် ဘေးမှာ မိန်းခလေးအသံကြားတယ် မှန်မှန်ပြော ခုကော ဈေးသွားတယ်ဆိုတာ ဘာတွေ သွားဝယ်ခဲ့တာလဲ ”။ ရှင်းပြဖို့မလိုအောင် နေတဲ့သူအဖို့ အထင်လွဲခံရလို့ ရှင်းပြရတဲ့ အလုပ်ဟာ မုန်းစရာအကောင်းဆုံးအလုပ်ပါ ကျနော် ဘာတွေဝယ်ခဲ့လဲဆိုတာ အသေးစိတ်ပြောပြဖို့လိုသလား အဲ့တာတွေ တစ်ခါခါ စိတ်ပျက်တယ် မပြောရင်လည်း ပြသနာက ပြီးမှာမဟုတ် “ ကျနော့်လိုကောင်မျိုးကို ခင်ဗျားတစ်ယောက်ပဲ ချစ်တာဗျ ကျန်တဲ့ မိန်းခလေးတွေ ကျနော့်ကို သုံးမှာတောင်မဟုတ် လိုက်ပြီး အူတိုမနေနဲ့ ပြီးတော့ ကျနော် ဘာဝယ်ခဲ့လဲဆိုတာ တကယ်သိချင်တာလား ၊ ကျနော့်ဘောင်းဘီတွေ လှန်းထားရင်း ပျောက်သွားလို့ အဲ့တာ အတွင်းခံဘောင်းဘီသွားဝယ်တာဗျ. .... ကဲ ကျေနပ်ပြီလား ” ။ “မ” ရယ်သံတွေကို ချစ်ပေမယ့် အဲ့နေ့က အတောမသတ်နိုင်အောင် ရယ်နေတဲ့ ရယ်သံတွေကို မုန်းတယ် အဲ့ရယ်သံတွေကြားမှာ ကျနော့်လွတ်လပ်မှုတွေကို စတေးလိုက်ရလို့ ။
အချစ်ဆိုတာ ချစ်အောင်လုပ်တာလည်း သူပဲဆိုရင် မုန်းဖို့လမ်းစကိုလည်း သူကပဲ ပျိုးထောင်လိုက်တာပါ ။“ မောင်.... မင်းက လောဘမရှိတဲ့ ကောင်လေးပဲ တကယ်ဆို ကိုယ့်ဘ၀တက်လမ်းအတွက် စွန့်စားစရာရှိ စွန့်စားရမှာပဲ တစ်နေရာတည်းမှာ မြဲနေတယ်ဆိုတာ လူဖျင်းတွေအတွက် ဆင်ခြေပဲ ကိုယ့်ဘ၀တက်လမ်းအတွက် ကောင်းမယ်ထင်ရင်တော့ မင်း ပြောပြောနေတဲ့ ကျေးဇူးတရားတွေ လူကျင့်ဝတ်တွေကို ဖောက်ဖျက်ရမှာပဲ ” ။ မသိရင် မှတ်ထားလိုက်ပါ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ညံ့တယ် သိမ်ဖျင်းတယ်ဆိုတဲ့ စကား အဲ့ဒီယောက်ျား ရှေ့မှာ ဘယ်တော့မှ မပြောမိပါစေနဲ့ ။ “ ဟား....ဒါ အစောကြီးတည်းက ခင်ဗျား သိသင့်တာပဲ ကျနော်ဟာ ငွေရှာတော်တဲ့သူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ၊ ကိုယ့်မိသားစု အိမ်ထောင်တစ်ခုကိုတော့ ကျနော်တာဝန်ယူနိုင်ပါတယ် အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ ကျနော်ချစ်တဲ့မိသားစုလေး တည်ထောင်နိုင်ရင် ကျနော့်အတွက် လုံလောက်ပြီး ” ။ အဲ့နေ့က သဘောထားတွေ ကွဲလွဲဖူးတဲ့ ပထမဆုံးနေ့ပါ ။
စစ်မှန်တဲ့ ပေးဆပ်ခြင်းဆိုတာ ကာယကံရှင်မသိမှ ပေးဆပ်ခြင်းမည်ပါတယ် အဲ့ဒီပေးဆပ်ခြင်းတွေကို ရင်ဖွင့်တယ် တိုင်ပင်တယ်လို့ အမည်တပ်ပြီး စိတ်ခံစားချက်တွေကို တစ်ပါးသူကို ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့တာ ခင်ဗျားချစ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ သိက္ခာကို ပက်ပက်စက်စက်နင်းချေလိုက်တာပါပဲ ။ အဲ့ဒီသူစိမ်းတွေရဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေ မှတ်ချက်တွေကြားမှာ ကျနော့်မာနတွေ ဘယ်လောက်ထိ ပွန်းပဲ့သွားလိုက်လေမလဲလို့ ခင်ဗျားတွေးမိရဲ့လားဗျာ သူတို့ရဲ့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ စကားတွေ အထင်သေးတဲ့အကြည့်တွေ အောက်မှာ သေးဆုံးသွားရတဲ့ ကျနော့် မာနတွေကို ခင်ဗျားမြင်နိုင်ရဲ့လားဟင် ချစ်သူတွေဆိုတာ ရင်ဘတ်ချင်း အနီးဆုံးသူတွေပါ တစ်ယောက်ရင်ခုန်သံကို တစ်ယောက်နားလည်ကြေးဆိုရင် ကျနော့်ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို ဘာကြောင့်များမသိတာပါလိမ့် မသိဟန်ဆောင်တာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ အဲ့တာတော့ ကျနော့်ထက် ကျနော့်ချစ်သူပါလို့ ဆိုတဲ့ ခင်ဗျား ပိုသိလိမ့်မယ်ထင်တယ် ။
“မောင်....ခုနောက်ပိုင်း မင်း “မ” ကို ခင်ဗျားဆိုတဲ့ အသုံးတွေ သိပ်သုံးနေတယ်နော် ချစ်လို့အလိုလိုက်လည်း သည်းခံတယ်ဆိုပေမယ့် မင်း ရိုသေမှုတော့ရှိသင့်တယ် ပြီးတော့ ကိုယ့်ကို ခဏခဏမအော်စမ်းပါနဲ့ မကြိုက်ဘူး ” ။ တစ်ခါခါတော့ ကျနော့်ရဲ့ မာနတွေ မကျေနပ်ချက်တွေကို မေ့ထားလို့ ချစ်သူနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေကို ဖန်တီးချင်တာပေါ့ ။ သူအလုပ်တစ်ခုခု လုပ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ပခုံးပေါ် ကျနော့်မေးလေးတင်လို့ ရောက်တက်ရာရာတွေ ပြောမိတယ် သူစာဖတ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုလုပ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ပေါင်ပေါ်ကျနော် ခေါင်းအုံးလို့ ခလေးဆိုးကြီး လုပ်မိတာ ခလေးဆန်တယ်ဆိုတာထပ် ကျနော့်ရဲ့ အချစ်တွေကို ခင်ဗျားကြည်နူးအောင် ပြနေတာပေါ့ ။သူ ကျနော့်ကို သိပ်ချစ်တာပေါ့ အသေးစိတ်လေးကအစ ဂရုစိုက်တတ်တာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခပ်တည်တည်နေပေမယ့် ကျနော့်အပေါ် သူမတူတဲ့ချစ်ခြင်းတွေပေးခဲ့တာ ကျနော်တစ်ယောက်တည်းပဲ သိတယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ မှတ်ချက်တွေကိုတော့ ကျနော်က ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ ။ “မင်းကလည်း ကိုယ့်ထပ်အသက်အများကြီး ကြီးတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်ရတယ်လို့ကွာ မင်းတို့ ၂ယောက်ယှဉ်သွား သူများတွေ သားမိလို့ထင်မယ် ” ကျနော့်သူငယ်ချင်းကို ကျနော် ပြုံးပြုံးလေး ချေပလိုက်တာက “ မင်းအချစ်ဆိုတာကို မခံစားဖူးသေးလို့ပါ ” ကျနော်အဲ့တုန်းကတော့ အချစ်သူရဲကောင်းကြီးပေါ့ ။
တစ်ဆိတ်တော့ ၀န်ခံပါရစေ.... ကျနော်တို့ ခုချိန်ထိ ရိုးသားစွာချစ်ခဲ့ကြတာပါ ။ ဟင်အင်း နည်းနည်းတော့ပိုတယ် မ .. ခေါင်လျှော်ပြီးစနေ့ ဆံပင်တွေ သုတ်နေရင်း ကျနော့်အနားရောက်လာတဲ့ အချိန် အဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ရနံ့က ကျနော့်ရင်ခုန်သံတွေကို ပိုမြန်သွားစေပါတယ် ကျနော့်ကို အချစ်နတ်ဆိုးတစ်ပါးပါးက များ ၀င်နှောင့်လိုက်သေလားမသိ ကျနော် သတိရတဲ့ အချိန် မ... ကျနော့်ကို အံ့သြတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်လိုပါ ချစ်တယ်လို့ပြောရမှာတောင် ရှက်တတ်တဲ့ကျနော် အဲ့နေ့က “မ” ကို ကျနော် အကြင်နာပေးလိုက်မိတယ် ပြီးတော့ ကျနော့်ဘယ်ဘတ်ရင်အုံပေါ် သူ့လက်ကလေးတင်လို့ ကျနော့်ရင်ခုန်သံတွေကို သူစမ်းကြည့်ပါတယ် “ ဟယ်တော့...မောင် ၊ မင်းတကယ် ရင်ခုန်သံတွေမြန်နေပါလား ဒီနေ့ ဘာစိတ်ကူးများပေါက်လို့တုန်း နမ်းပါဆိုရင်တောင် ရှက်တတ်တဲ့ မင်းက ခုတော့ ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ ဟဟား ” ၊ “ ဟား... အဲ့လိုမရယ်စမ်းပါနဲ့ ကျနော်ရှက်တယ်ဗျ ပြီးတော့ ကျနော့်ကို မစိုက်ကြည့်နဲ့ ခု ကျနော် တော်တော် နေရခက်နေတယ် တော်ပြီဗျာ ပြန်တော့မယ် ” သူကတော့ သူ့အခန်းလေးမှာ ရယ်သံတွေနဲ့ ကျန်ခဲ့တယ် သူ မှတ်ချက်ပေးလိုက်တာ “ ခလေးကျနေတာပဲတဲ့ ” ။
အဲ့ဒီညနေခင်းဟာ ကျနော်နဲ့ သူ့ကြားမှာ မရှိခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ ကျနော် ခုထိနောင်တရနေတုန်းပါ ။ စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့ .. မ .. စာရေးတာလည်း ၀ါသနာပါလိုက်မယ်လို့ ကျနော်လုံးဝမထင်ခဲ့ပါ တစ်ခါတရံ ကျနော်ရေးခြစ်ဖူးတဲ့ ကဗျာအပိုင်းစ စာအပိုင်းစလေးတွေကိုတော့ မှတ်ချက်စကားလေးတွေ ပေးဖူးတယ် ။ အဲ့ညနေက ကျနော်သူ့အခန်းကို သွားလည်တုန်း စားဖို့ဘာမှမရှိတာနဲ့ မိုးအေးအေးထဲ အနွေးထည်ပါးလေးဝတ်လို့ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါးလေး အပြေးသွားဝယ်ပေးခဲ့တယ် ။ စာအုပ်စင်မှာ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီးပါ တစ်ချို့နေ့တွေဆို နေ့ခင်းပိုင်းတည်းကနေ အလည်လာတဲ့ကျနော် စာအုပ်တွေဖတ်ရင်း ညနေစောင်းလောက်မှ ပြန်ဖြစ်ပါတယ် ။ကျနော် ဆွဲယူလိုက်မိတဲ့ စာအုပ်က အစိမ်းရောင် အရောင်တွေတော့ ပျယ်လွင့်နေပါပြီး တော်တော်ကြာနေပြီထင်တယ် အခေါက်ရာလေးပါတဲ့ စာမျက်နှာကို ကျနော်ဖွင့်ဖတ်လိုက်တဲ့ အခိုက် ကျနော့်တကိုယ်လုံးလေထဲ လွင့်မျောသွားသလိုပါပဲ ပြီးတော့ ကျနော် မြင်နေတာတွေ တကယ်မဟုတ်ပါစေနဲ့လို့  ဆုတောင်းရင်း ဒါပေမယ့် ကျနော့်လက်က အဲ့စာရွက်လေးကို ဆွဲဆုတ်မိသားဖြစ်သွားတယ် ပြီးတော့ အဲ့ညနေက သူပြန်အလာကို ကျနော်မစောင့်ပဲ အစောကြီးပြန်ခဲ့တယ် ။
တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ ခွဲခွာခြင်းကြားမှာ ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရတွေဟာ ခဏလေးနဲ့ ပျက်ပြယ်သွားတတ်ပါသလား ။ အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေရုံနဲ့ ပြီးမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ရူးမိုက်တဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်ပါ ပြီးတော့ ကျနော့်ပါသာဖွင့်ဆိုလိုက်တဲ့ အချစ်ဆိုတာ ဦးနှောက်ရဲ့ မြစ်ဖျားခံမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ် အချစ်က ပင်လယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်က မြစ်ပါ တစ်ခါခါ မြစ်က ရေစီးသန်သွားတတ်ပြီး တစ်ခါခါတော့ ပင်လယ်က ဒီရေတွေနဲ့ မြစ်ကိုဖျားယောင်းသွားတတ်ပါတယ် ။ ကိုယ်မဖန်တီးယူပဲဖြစ်တည်လာတဲ့ အချစ်ကို ကိုယ်တိုင်ချေဖျက်ရတာကတော့ ကိုယ်မွေးတဲ့ခလေး ကိုယ်ပြန်သတ်ရသလိုပါပဲ သိပ်ကိုခံရခက်ပါတယ် ။ချစ်ခြင်းနဲ့ လက်ထပ်ခြင်းက ချစ်သူတွေအတွက်းပန်းတိုင်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ ပန်းတိုင်မရောက်ခင် လမ်းတစ်ဝက်မှာ ခြေခေါက်လဲကြတဲ့သူတွေပါ ။ ချစ်နေကြတုန်းက ကျနော်ဟာ အချစ်သူရဲကောင်းပေမယ့် နှစ်ကိုယ်တူဘ၀တည်ဆောက်ဖို့အတွက်တော့ ကျနော်ဟာ သူရဲကောင်းမဟုတ်ခဲ့ပါ ။
ဒီပြသနာဟာ မသိဟန်ဆောင်လို့ ပြီးသွားမှာမဟုတ်မှန်း ကျနော်သိပါတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တည်ငြိမ်အောင်လုပ်နေတဲ့ အချိန်အတွင်း ကျနော် “ မ ” နဲ့ အဆက်သွယ်မလုပ်ခဲ့ပါ ။အချစ်ဆိုတာ ဖန်တီးယူလို့လည်းမရသလို လုပ်ယူလို့လည်းမရပါ အချစ်က များများလှည့်စားရင် များများပြန်ခံရတတ်တဲ့ အချစ်နတ်ဆိုးပါ ကိုယ်တိုင်ဖျော်စပ်ထားတဲ့ အချစ်ဖျော်ရည်တစ်ခွက်မှာ ကိုယ်က အဆိပ်ခတ်ထားတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီဖျော်ရည်ကို ကိုယ်ပဲ တစ်နေ့သောက်ရမှာပေါ့ ခင်ဗျား ကျနော့်ကို လိမ်ခဲ့တဲ့အတွက် တန်ပြန်တဲ့ နာကျင်မှုတွေ ခင်ဗျားပြန်ခံစားရမယ် ။ မမုန်းပါ ကျနော် မ...ကို ဘယ်တော့မှမမုန်းခဲ့ပါ မငိုဖူးသော မျက်လုံးများ မလှပါတဲ့ ဒီနေ့ ကျနော်တို့ ၂ယောက်လုံးရဲ့ မျက်ဝန်းတွေ သိပ်ကိုလှနေပါတယ် ။
“ မောင်...ဘာလို့ မ ..ကိုရှောင်နေတာလဲဟင် ဘာတွေမကျေနပ်လို့လဲ ဘာတွေများစိတ်ဆိုးစရာရှိနေလို့လည်း မောင်ရယ် ဘယ်လောက်များ စိတ်ပူနေရမလဲ မသိဘူးလားကွယ် ” ။ ဟုတ်ပါတယ် သူ တကယ်စိတ်ပူနေမယ်ဆိုတာ ကျနော်သိပါတယ် ။ ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် သတိပေးနေတာ မင်း မသနားလိုက်မိစေနဲ့ဆိုတာပါ တစ်သက်လုံးနောင်တကင်းကင်းနဲ့ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ ။ မ.... ကျနော့် ပါးပြင်ကို လာတို့ထိတိုင်း အရင်ကဆို ကျနော် သိပ်ကိုကြည်နူးပါတယ် အခုတော့...........။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို မလိမ်ညာမိပါစေနဲ့ ကျနော်အချစ်တွေဟာ ဆူးမရှိတဲ့ ငါးတစ်ကောင်ရဲ့ အချစ်မျိုးပါ ဒါပေမယ့် ကျနော့်မှာလည်း အဆိပ်ရှိပါတယ် အဲ့ဒီအဆိပ်ကတော့ ရုန်းထွက်ခြင်းအဆိပ်ပါ ဘယ်တော့မှာချစ်သူရင်ခွင်ကို ပြန်လာတော့မှာမဟုတ်တဲ့ ရုန်းထွက်ခြင်းအဆိပ်ပေါ့ ။ ကျနော် ဆုတ်ယူခဲ့တဲ့ စာရွက်လေး သူ့ကို ပေးပြန်ပေးလိုက်တယ် အဲ့အချိန်မှာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ မ...ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေဟာ သိပ်သနားဖို့ကောင်းပါတယ် အရှိုက်ကိုထိုးခံထိလိုက်တဲ့ ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်းလို ၊ အမောက်ကိုတို့ထိ ကစားခံရတဲ့ မြွေဟောက်တစ်ကောင်ရဲ့ မာနမျိုးလို ချောင်ပိတ်မိနေတဲ့ ကြွက်ငယ်တစ်ကောင်ရဲ့ အသနားခံသလိုလို ဖော်ပြရခက်တဲ့ မျက်ဝန်းလို ခလေးတစ်ယောက်က စော်ကားတာ ခံလိုက်ရတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်းလို ။
ဒီနေ့ စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ကျနော်ရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေကို သင်္ဂြုလ်လိုက်ပါတယ် ကျနော် နောင်တ ဘယ်တော့မှမရပါ ၀မ်းနည်းပါတယ် ချစ်သူ ။ ကျနော် ချစ်သူရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို တည့်တည့်စိုက်ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်ပါတယ် “အိမ်ထောင်ပျက်ဖူးတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ဖို့လောက်အထိ ကျနော့်နှလုံးသားတွေကို ဦးနှောက်က ခွင့်မပြုပါဘူး ခင်ဗျား ကျနော့်ကိုလိမ်တယ် ” ကျနော် သူ့ကိုကျောခိုင်းလှည့်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ရုန်းထွက်သွားတဲ့ ငါးတစ်ကောင်လိုမျိုး နောက်ပြန်မလှည့်ကြည့်ခဲ့ပါ ကျနော့်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်း ကို လှည့်ဖျားခဲ့မိတဲ့အတွက် ဒီလောက်တော့ ဒဏ်ရာတွေပေးခဲ့သင့်တာပေါ့ ရိုးသားစွာ မာနကင်းစွာဝန်ခံပါတယ် ကျနော်လည်း ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါ ။
ကျမ အသက် ၁၈ နှစ် အချစ်ဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ယူခဲ့ နောက် ၇ နှစ်အကြာ အဲ့ဒီယောက်ျားဟာ ကျမအတွက် အမုန်းဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သမီးကြီးမွေးတဲ့နေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် ၁၉၉၃ ခုနှစ် ။
at 2:12 PM 24 comments
ကျနော်တို့ဟာ အိမ်ဝေးသူများပေါ့ ဘာရည်ရွယ်ချက် ဘယ်လိုဦးတည်ချက်တွေဆိုတာ တိကျသေချာမှုနည်းပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့တွေ အိမ်နဲ့ဝေးခဲ့ကြသူတွေ ။ အမေက ချစ်ပြီး အမေ့ကိုချစ်သော အမေ့ရဲ့သားများ အကြီးဆုံးသားမှစ အငယ်ဆုံး ငထွေးရူး ကျနော် အထိ အမေနဲ့အိမ်ကိုခွဲခဲ့ကြတာ ကြာပါပြီး အမေကတော့ စိတ်မာပေမယ့် တစ်ခါခါတော့ “ အမေလည်း ငါ့သားတွေကို အောင်းမေ့တယ်ဟယ် ” တဲ့ ဖုန်းထဲက အမေ့ရဲ့ အဲ့အသံကြားရင် ကျနော့်အသံတွေက တုန်တုန်သွားတယ် ။ သစ်ပင်တစ်ပင်တည်းမှာ စုပြုန်သီးကြတဲ့ အရွယ်စားစုံ သစ်သီးတွေနဲ့ ကျနော်ရဲ့ ၅၂၈ များဟာလည်း အနေတွေဝေးကြပေမယ့် အရေးကြီးတော့ သွေးနီးကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ ငွေပေးဝယ်လို့မရတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ ကိုယ့်အတွက် အမြဲအဆင်သင့် သူတို့ရှိနေပေးတာ ကြည်နူးမိတယ်။
ကိုငယ့် မိန်းမဆီက ဖုန်းလာတယ် “ မောင်လေး ...နင့်အစ်ကို အစာအိမ်အူအတက်ပေါက်လို့ ခွဲရမယ် အစ်မလည်းတစ်ယောက်တည်းနဲ့  ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဘူးဟယ် ” တဲ့ ။ အရင်က မိသားစုမှာ အဆိုးဆုံး အပင်ပန်းဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့ အစ်ကို ဖျားနာခဲတဲ့ အစ်ကို ဆေးရုံးတတ်ရမယ်ဆိုတော့ ကိုယ်လည်း ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ကြောက်လည်းကြောက်တယ် ဘန်ကောက်လို နေရာမျိုးမှာ ခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုတော့ ငွေကဘယ်လောက်ကုန်မှန်းမသိ စက်ရုံအလုပ်သမား အစ်ကိုတို့ လင်မယား အလုပ်ကို မဲနေကြတာနဲ့ ကျန်းမာရေးကိုဂရုမစိုက်တာကြာပြီထင်တယ် ဗိုက်အောင့်တယ်ဆိုတိုင်း ဆေးဝယ်သောက်ပြီး သက်သာတယ်ထင်ခဲ့တာ ။“ နင့် အစ်ကိုက နင့်ကိုတော့ အကြောင်းကြား အမေ့ကိုတော့ အသိမပေးနဲ့တဲ့ အမေစိတ်ပူမှာစိုးတယ် ပြောတယ် ” ။ ဒီလိုပါပဲ ကျနော်တို့ ညီအစ်ကိုတွေ ဘာပဲလုပ်လုပ် အမေစိတ်မချမ်းသာမှာတော့ ကြောက်ကြတယ် ။
သူနဲ့ ကျနော်ဖုန်းမပြောဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပါပြီး ရုပ်ချင်းဆင်သလောက် မရှိသင့်တဲ့ မာနထားတတ်ပုံချင်းလည်းတူတယ် ။“ ဟလို...ကိုကြီးလား ကျနော်ပဲ ၊ ကိုငယ် ဆေးရုံတက်နေရတယ်တဲ့ သူ့မိန်းမနဲ့ ကီးကိုက်တာမကိုက်တာ အပထား နီးနီးနားနား ကိုကြီးပဲ ရှိတာ အလုပ်က ခွင့်ယူပြီး သွားလိုက်အုံးနော့် ” ။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ င်္ညီအစ်ကိုက မာနတွေနဲ့ သံယောဇဉ်တွေကို အမှောင်ဖုန်းထားကြတာပါ သူလည်း ကျနော့်ကိုချစ်သလို ကျနော်လည်း သူ့ကိုချစ်တာ သူသိပါတယ် သူကတော့ ခပ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ဆိုးတယ် ကျနော်ကတော့ မိသားစုမှာ လိမ်မာမလိုလိုနဲ့ ပြောစကားနားမထောင်လို့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေက ချစ်စနိုးနဲ့ လူပုံအလယ်မှာမကြာမကြာဖွင့်ချတတ်တာက ပျော့ပျော့နဲ့နံတဲ့ ကြောင်ချေးးတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် ကြောင်ချေးပါ ။
ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်း မစဉ်းစားတတ်တာနဲ့ မြို့က အစ်မဆီကိုဖုန်းခေါ်ပြီး တိုင်ပင်တော့ သူလည်း ကြောက်ပြီး အသံကတုန်နေတယ် “ အစ်မ...အမေ့ကိုမပြောနဲ့နော် အမေစိတ်ပူနေလိမ့်မယ် ” ။ ဒါမျိုးကျတော့ အားကိုးရတဲ့ ကျနော့်ယောက်ဖ ဘုန်းကြီးလူထွက် ဗေဒင်တွေတွက် ယတြာတွေချေ ဟုတ်တာမဟုတ်တာ ပျောက်တာမပျောက်တာ အပထား ဒါဟာလည်း မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် စိတ်စွမ်းအားတစ်ခုမို့ ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းမိတယ် ။ နောက်တစ်ခေါက် ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီးလို့ သေချာရင် ခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အစ်ကိုလည်း ယတြာကပဲ ကောင်းလို့လား တိုက်ဆိုင်တာလားတော့မသိပါ မခွဲဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ မရီးဆီကဖုန်းလာမှ ကျနော်လည်းစိတ်အေးရတော့တယ် အစ်မဆီအကြောင်းကြားတော့ အစ်မက သူ့ယောက်ျား ယတြာကောင်းလို့တဲ့း) ကျနော်ထင်တယ် အဲ့နေ့က ကပ်စေးနဲတဲ့ အစ်မ ၊ ယောက်ဖကို ဟင်းကောင်းချက်ကျွေးလိမ့်မယ်ဆိုတာ ။
အစ်က်ို ဆေးရုံကဆင်းပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဖုန်းထပ်ပြောဖြစ်သေးတယ် အစ်ကိုပြောတဲ့ စကားက ကျနော့်ရင်ထဲ အပ်နဲ့ထိုးလိုက်သလိုပါပဲ “ အစ်ကိုသေရမှာမကြောက်ပါဘူး ဒါပေမယ့် မိဘနဲ့ဝေး ညီကိုမောင်နှမ နဲ့ဝေးပြီး အစ်ကို သူများနိုင်ငံမှာ ဧည့်သည်မသာ အဖြစ်နဲ့တော့ မသေချင်ဘူး ငါ့ညီရာ ” တဲ့ ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ ငွေဆိုရင် ငွေနောက်လိုက်ရင်း ကျနော်တို့တွေ အိမ်နဲ့ ပိုပိုဝေးသွားသလိုပါပဲ ။ ကျနော်တို့တွေဟာ အိမ်နဲ့ဝေးသူတွေပေါ့ ဒါဟာ ကျိန်စာတစ်ပုဒ်တော့ မဖြစ်တန်ကောင်းပါဘူး တစ်နေ့တော့ အိမ်ပြန်ပြီး မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးမှာ ငါးပိရည်တစ်ခွက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ထမင်းမြိန်ချင်သေးတယ်ဗျာ ။ တစ်နေ့တော့ပေါ့ ---- တစ်နေ့နေ့တော့ ...............။
at 12:03 AM 17 comments
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိုးကျွေးလို့ သားကောင်က ကျေနပ်
တစ်ခါခါ သားကောင်ဟာ သားကောင်မှန်းသိလျှက်နဲ့ မုဆိုးလည်းဖြစ်ချင်မိ
သားကောင်ဟာ အစာဟပ်ခံရတဲ့ တီကောင်
သားကောင်ဟာ ငမျှားချိတ်မှာ မိတဲ့ငါး
သားကောင် မှာ ချစ်ခြင်းနဲ့သံယောဇဉ်တွေမရှိ
သားကောင်မှာ မရှိသင့်ပဲ ရှိနေတာ အတ္တ နဲ့ မာန
သားကောင် က သူ့ကိုယ်သူရူးရူးမိုက်မိုက် နဲ့ ထိုးကျွေးတယ်
သားကောင် ဟာ သားကောင်းဖြစ်လို့ အစားခံရတယ်
သားကောင် ဟာ လူမသိသူမသိ အထာပေးခံရတယ်
သားကောင် ဟာ ပန်းတိုင်မရှိပေမယ့် တရွေ့ရွေ့နဲ့တော့ လျှောက်နေတုန်း
သားကောင် ဟာ သားကောင်မှန်း သိသိနဲ့ မုဆိုးတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို အားကျ
သားကောင် ဟာ သားကောင်မဖြစ်ခင်တုန်းက သားကောင် မဟုတ်ခဲ့ပါ
သားကောင်ဟာ သားကောင်မဟုတ်တော့တဲ့တစ်နေ့ မုဆိုးလည်းမဖြစ်လိုတော့ပါ
သားကောင် ဆိုတာ အစားခံရတဲ့အမျိုး
ဒါပေမယ့် သားကောင် ဟာ သူ့ဘ၀သူတော့ တိတ်တဆိတ်လေး ကျေနပ်နှစ်သက်လို့
အစားခံရမှန်းသိသိနဲ့ ထိုးကျွေးရဲတာ မင်းဟာ သူရဲကောင်းပါ သားကောင် ။
at 11:52 PM 10 comments
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ကိုယ်လွယ်နေကျ အိတ်ကို သွန်ချလိုက်တယ် တစ်ခါခါ လိုချင်လို့နှိုက်လိုက်တာက တစ်ခြား ထွက်လာတာကတစ်ခြား အကောင်းစားတွေဆို သုံးရမှာ နှမြောလို့ ဘတ်အိတ်လည်း ကောင်းကောင်းဝယ်မကိုင်ပါဘူး ဈေးပေါပေါ ဘတ် ၅၀ တန်ပဲကိုင်တယ် ။အရင်က ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲ တစ်နေ့စာချိန်ထိုးပြီး သုံးဖို့ပဲထည့်ပါတယ် နောက်ပိုင်းတော့ အခန်းသော့က စိတ်မချရတာနဲ့ ရှိတာလေးပြောင်မှာစိုးလို့ ပိုက်ဆံအိတ်လေးသုံးဖြစ်တယ် ။ဒီထဲမှာပါတဲ့ အသုံးဆောင်တွေက ပန်းရောင်တွေများလို့ ကျနော်မောင်မျိုးကို ပန်းရောင်ကြိုက်သော ပန်းမင်းသမီးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျားး) တကယ်တော့ အလကားရတာတွေပဲ လိုက်သုံးနေလို့ပါ ။
ပန်းရောင် ကော်ပိုက်ဆံအိတ်လေးက အထဲမှာ ဘော်ပင် ၊ခဲတဲ အကြွေတွေခုထိသုံးနေတုန်းဖြစ်တဲ့ ထိုင်းဘတ်စေ့ နည်းနည်း ပါတဲ့ အိတ်လေးပါ အဲ့အိတ်လေးက ရုံးက ညီမလေးတစ်ယောက်ရဲ့အိတ် သူက မသုံးတော့ပဲ ပိုနေတာနဲ့ ကျနော့်အိတ်ထဲမှာ စုပြုန်ပြီးထိုးသိတ်ထားတော့ ကိုယ်လိုတဲ့ အချိန်ကျ ထွက်မလာတတ်လို့ အခုလို အိတ်သေးသေးလေးထဲ အသေမွှားလေးတွေထည့်ထားလိုက်တယ် ။အခုလိုဆောင်းတွင်းမှာ အပူများတဲ့ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းတွေက သားရည်ဖတ်လေးလိုလိုဖြစ်ပါတယ် နှစ်တိုင်းပါပဲ အဲ့တာကို အားတိုင်း ခွာခွာနေကော ခွာလို့ကောင်းတယ် မကောင်းတာက အသားထဲစိုက်သွားပြီဆိုရင် သွေးတွေထွက်လို့ပါ အဲ့တာကြောင့် အရောင်မပါတဲ့ အဲ့အဆီနှုတ်ခမ်းဗူးလေးဆောင်ထားဖြစ်တယ် ။
အဖြူနဲ့ အစိမ်းပါတဲ့ စာအုပ်သေးလေးက ဘာလေးညာလေးမှတ်တာ ( ဘယ်သူ့ကိုက ဘယ်လောက်ပေးစရာရှိတယ်ခေါင်းရင်းဆိုင်မှာ ဈေးဝယ်ထားတာက ၁၅၀ ပေးဖို့ကျန် ) အဲ့လိုမှတ်စုတွေပါး) တစ်ခါတလေတော့ စိတ်ကူးထဲပေါက်တဲ့ စာတိုလေးတွေ ၂ ကြောင်း ၃ ကြောင်းခြစ်တတ်ပါတယ် ။ ဖုန်းနံပါတ် အချို့နဲ့ အလုပ်က မှတ်သားစရာ အကြောင်းရာလေးတွေကိုလည်း အဲ့စာအုပ်လေးထဲ ထည့်မှတ်ဖြစ်တယ် ။ ဘေးနာက ဆင်ရုပ်အပြာရောင်လေးက သော့ ( လေယာဉ်သော့ ၊ ကားသော့ ၊ဆိုင်ကယ်သော့ ) မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား ကျောင်းသွားရင် စီးဖို့ဝယ်ထားဖြစ်တဲ့ တစ်ပတ်ရစ် စက်ဘီးသော့ပါ ။
အောက်က ပန်းရောင်စာအုပ်က ကျောင်းစာအုပ် ဟဲဟဲ တော်တော် တတ်မယ့်ပုံပဲ စာရွက်တွေ ပြုတ်ပြုတ်ထွက်နေလို့ အပေါ်က ကလစ်နဲ့ ညှပ်ထားရတယ် ။ အထဲမှာတော့ ပုံနှိပ်စာအုပ်မရှိတော့ သေချာလေးရေးဖြစ်တယ် ပေတံနဲ့တားတယ် ကာလာပင်လေးနဲ့ခြစ်တယ် ။ နားကြပ်က သီချင်းနားထောင်တယ် ဒီပုံက ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတာဆိုတော့ ဒီထဲမှာတော့ ဖုန်းမပါဘူး ဖုန်းတွေကတော့ ဒီမှာဈေးပေါတယ် မြန်မာပြည်မှာသာဆို ဘော့စ်တွေမှ ကိုင်နိုင်တာ ဒီမှာကတော့ ကိုယ်ကမဘော့စ်ပေမယ့်လည်း ကိုင်နိုင်ပါတယ် ဖုန်း ။ ဘေးက မုန့်ထုတ် အရေးပေါ်အခြေနေမှာ သူက အသုံးဝင်တယ် ဆာနေတဲ့အချိန် တစ်ခုလောက်ကောက်ဝါးထည့်ပြီး ရေနဲ့ မျှောချလိုက်တယ် အဆာပြေသွားကော ။
ပေါင်တာဗူး ဈေးတော်တယ် ၁၀ ဘတ်တည်း မျက်နှာက အဆီပြန်လို့ လက်ထဲ နည်းနည်းဖျူး ပြီးရင် မျက်နှာကိုပွတ်ထည့်လိုက်တယ် တစ်ခါခါတော့ များသွားလို့ ကိုယ့်မျက်နှာက တရုတ်သရဲလိုဖြစ်ဖြစ်သွားကော ။သာရည်ပိုက်ဆံအိတ် အိတ်ကတော့ နည်းနည်းလန်းနေတယ် မလန်းတာက အထဲက အသပြာ လမကုန်သေးဘူး သူက မော်ဒယ်မလေးတွေလို ပြားကပ်သွားပြီး ။ မှတ်ပုံတင် ၊ စာကြည့်တိုက်ကဒ် ၊ ကျောင်းသားကဒ်နဲ့ အလုပ်ကထုတ်ပေးတဲ့ ၀န်ထမ်းကဒ် ။
ကုန်ပြီးမရှိတော့ဘူး အရူးလွယ်အိတ်ကို ဖွင့်ပြလိုက်တဲ့နောက် သူကပြောတယ် ရှိတာ ဒါအကုန်ပဲတဲ့ ဒီပို့စ်က တကယ်တော့ အကြံနဲ့ပါ :) ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အိတ်ထဲမှာလည်း ဘာတွေများရှိနေသလဲလို့ သိချင်တာနဲ့ ရေးဖြစ်သွားတာပါ ။ သူတို့အိတ်ထဲမှာကော ဘာတွေများရှိပါလိမ့် ????
ရေးပေးကြပါ ပျော်စရာလေးအဖြစ် ကျနော်က စလိုက်တာပါ မရေးလို့လည်းရပါတယ် ( မရေးရင် အိတ်ထဲမှာ ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းသော တရားမ၀င်ပစ္စည်း များသယ်ဆောင်မှုနဲ့ ဖမ်းပါမယ် ။ အားလုံးလောက်မြှောက် ပြည်တု့ရဲတွေ ၀ိုင်းထားပြီးပြီး :P )
at 2:38 PM 19 comments
မလွဲတာတောင် တော်တော်ကြာပြီး အလွဲကြီးကြီးတွေမလွဲဖြစ်ပေမယ့် အလွဲသေးသေးလေးတွေကတော့ တော်တော်များပါတယ် ။ ခုချိန်ထိ အ၀တ်စားဆို ဖြစ်သလိုဝတ်တတ်တဲ့ကျနော် ၀တ် ၀တ်တယ်ဆိုပြီးကော ။ မနေ့က အပြင်သွားဖြစ်တယ် အရုပ်တွေပါတဲ့ ဘောင်းဘီတို အရှေ့က ချုပ်ကြိုးပါတဲ့ဟာ ရေချိုးပြီး ကမန်းကတန်း ပြေးဆင်း စောင့်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုအားနာတာနဲ့ ဘောင်းဘီ ဒီနေ့ကျမှ ၀တ်ရတာ ကျပ်နေသလိုလို ကျနော်များဝလာသလားဆိုပြီး ပျော်နေလိုက်သေးး) တကယ်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဘောင်းဘီက ရှေ့နောက် မှားနေတာ ကိုယ့်မှာ အမှီးထွက်လို့ထွက်မှန်းမသိ အဲ့တာတောင် သူငယ်ချင်းက လာကုတ်နေလို့သိတာပါ “ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ငါ့ဖင်လာကုတ်နေတာတုန်း ” ဆိုမှ ဘောင်းဘီရှေ့နောက် မှားနေတယ်တဲ့ ဟား လွဲပြန်ပြီး အမှောင်ကွယ်လေးမှာ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်က ရှေ့ကကွယ် ကျနော်က တရုတ်သိုင်းကွက်နဲ့ ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပစ်လိုက်တယ် ကျင့်သားရနေလို့လားမသိ မြန်မြန်ပြီးသွားတယ် သူငယ်ချင်းက ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီး အမှီးစမ်းကြည့်သေးတယ် “ အေး မထွက်တော့ဘူး” တဲ့ အမှီး ။
ဒါကတော်တော်တော့ကြာပြီး ရုံးကအစ်မက အုန်းရည်သောက်မလားတဲ့ အင်း သောက်ချင်တယ် ဒီတိုင်းကြီးတော့ အုန်းရည်ဘယ်လိုမော့သောက်မတုန်း တစ်အောင့်ကြာမှ သောက်ဖို့ “ အစ်မ...ပိုက်ဘယ်နားထားတုန်း ” ၊ “ ရေစင်အောက်မှာ ” တဲ့ ကျနော်လည်း အဟုတ်အောက်မေ့လို့ သွားရှာတာမတွေ့ပါဘူး မတွေ့ဘူးပြောတော့ သူက ငါသွားယူပေးမယ်ဆိုပြီး ယူလာတဲ့ပိုက်က ရေဖျန်းတဲ့ ပိုက် သေတာပဲ အဲ့တာမှာ “ ကျနော် အုန်းရည်သောက်ဖို့ ဒီပိုက်နဲ့သောက်ရမှာလား ” ကိုယ်လည်း ရွဲ့တဲ့တဲ့မေးလိုက်တော့ သူက ဘာာမပြောညာမပြောနဲ့ ထိုင်ရယ်နေလိုက်တာ မပြီးနိုင် သူထင်တာ အုန်းရည်က သောက်လို့ကုန်ပြီး ညနေခြံထဲ ရေဖျန်းပေးမလို့ ပိုက်ကိုမေးတာထင်နေတာတဲ့ စိတ်တိုတိုနဲ့ အဲ့နေ့က အုန်းရည်မသောက်ဖြစ်လိုက်ဘူး ။
ကိုယ့်နာမည် မျိုး ကို ထိုင်းလိုခေါ်တာ မြောင် တဲ့ ။ แมง ဆိုတာကြောင်ကိုခေါ်တာပါ ပီအောင် ကိုယ့်နာမည်ကို ပြောပြလည်း သူတို့အသံထွက်က မြောင်ပဲ ဘလော့ကရတဲ့ နာမည်က အပြင်မှာပါတွင်တယ်ထင်ပါ့ အရင်က ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းတွေ ကြောင်မျိုးလို့ ခေါ်တာကို သွားသတိရမိတယ် ။ ဘန်ကောက်ရုံးကနေ ထိုင်းအစ်မတစ်ယောက်က ဧည့်သည်ကို မဲဆောက်ရုံးဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီး မြောင် ဆိုတာရှိတယ် သူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးသိချင်တာ မေးလိုက်လို့ပြောတယ်တဲ့ ။ အင်း ဖုန်းလာတော့ ကိုယ်လည်းဖုန်းကောက်ကိုင်ပြီး “ ဆော်ဝါဒီခပ်” လုပ်လိုက်တယ် သူမေးတာက “ ကြောင်သားလေး ” လုမြောင် ลูกแมง ရှိလားတဲ့ ဘာတုန်းဟ ငါတုိ့အလုပ်က ဘယ်တော့ကများ ကြောင်အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်သွားရတာလည်းမသိဆိုပြီး ကိုလည်း မသောက်ရပဲ မူးသွားတယ် ။ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆက်လာပြီး အခုပြောနေတာ ကြောင်သားလေး ဆို တဲ့ အော်...အဲ့တော့မှ ကိုယ်လည်း သဘောပေါက်ပြီး ဟုတ်ကဲ့လို့ဖြေလိုက်ရတော့တယ် ရှင်းနေလည်း ပြီးတော့မှာမဟုတ်လို့ ကျနော်လည်း လူစင်စစ်ကနေ ဘယ်တုန်းက ကြောင်ဖြစ်သွားမှန်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိလိုက်ဘူး ။
ကျနော်က တော်တော် အရယ်သန်ပါတယ် ရယ်ပြီးဆို မရပ်နိုင်တော့ဘူး စာသင်တဲ့ဆီမှာ ကိုယ်နဲ့ဘေးချင်းယှဉ်ရပ် 16-17 အရွယ် ညီမလေးတစ်ယောက်နဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်ရှိတယ် ကိုယ့်ကိုခင်ပြီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောပြတတ်တယ် ကိုယ်လည်းအကြံပေးစရာရှိပေး ဖော်ရွှီးလုပ်ပြီး ဆရာကြီင်္းလုပ်တန်လည်းလုပ်ပေါ့ ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့က ဆရာမက တစ်ခြားတစ်ဖွဲ့ကိုစာရှင်းပြနေတုန်း ကျနော်တို့အဖွဲ့က စကားများနေကြတယ် ခလေးမလေးက အရင်စပြောတယ် ” ဦး... ကနဲစော်ကလေ ရောက်စက ကုတ်နေတာပဲသိလား ခုများ ခါတာ ခါတာ ကျောင်းပါ ပြိုမယ်ထင်ရတယ် ရောက်စက ကျောင်းက သတ်မှတ်ထားတာ စကတ်က အတို သူဝတ်လာတာ ခြေမျက်စေ့ဖုံးတယ် သိလား အခု သွားကြည့်ကြည့်စမ်း သူတိုချလိုက်တာများ ဒူးအပေါ် တစ်ထွာလောက်တတ်သွားတယ် ကျောင်းလှေခါး တတ်ပြီဆို ၀ဲခနဲဖြစ်သွားလို့ လှေခါးတတ်နေတဲ့သူတွေ အကုန်လုံး သူ့ဆီအကြည့်ရောက်သွားကော ” ကျနော်လည်း ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး အဲ့ညီမလေး ပြောတဲ့ပုံစံ သူက အသံအနေထားနဲ့ အမူယာ လုပ်ပြနေတာဆိုတော့ ကျနော်လည်း ရယ်လိုက်ရတာမောလို့ ဘေးက ကောင်လေးကတော့ ရယ်နေတဲ့ ကျနော့်ကိုကော ပြောနေတဲ့ ကောင်မလေးကိုပါ စိတ်တိုသွားတယ်ထင်တယ် “ နင်ကကော ငါ့စော်လောက် လှလို့လား ရုပ်ကိုက ဘာညာ ဖြစ်တယ်နဲ့ သူက စကားနာပြန်ထို ကောင်မလေးကလည်းထပ်ပြောနဲ့ အတန်းက ဆူညံသွားတယ် အဲ့မတိုင်ခင်လေးတည်းက ကိုယ်က လူကြီးပီပီ အရီ ရပ်ပြီး တော်တော် ဆိုပြီး တားရမှာ ခုတော့ ကျနော် ရယ်လိုက်တာက ပွဲကြမ်းလာတာတောင် ဗိုက်ကိုနှိပ်ပြီး အရှိန်သတ်မရဖြစ်နေတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း စိတ်တိုမိပါရဲ့ ။ စိတ်ဆိုးသွားတဲ့ ဆရာမလည်း ကျနော်တို့ကို ထိုင်ထ အခါ ၃၀ ဆီလုပ်ခိုင်းလိုက်တာ ရှက်လိုက်တာ အဲ့တာ ရယ်မိတဲ့ အကျိုး ထိုင်းထလုပ်နေရင်း ကျနော်တို့ ၃ ယောက် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ဆက်ရယ်နေတုန်းး) ။
အလွဲလေးတွေက လွဲပေမယ့် ပျော်စရာကောင်းပါတယ် လွဲနေတုန်း စိတ်ညစ်ရပေမယ့် လွဲပြီးရင်တော့ တော်တော့်ကိုပျော်စရာကောင်းပါတယ် ။ အားလုံးပဲ လွဲနိုင်ကြပါစေ ပါးပါးလေးပဲ လွဲကြနော့် :P
at 11:47 AM 13 comments
အတိတ် က အရိပ်မည်းတွေ
ပစ္စုပန် ကို အရိပ်လာမကျမယ့်နေ့
ကိုယ့် အနာဂတ်ကို ကိုယ်အဖီထိုးမယ်
လွမ်းဆွေးမှု အမှိုက်သရိုက် နဲ့ ၀မ်းနည်းခြင်း ဖိနပ်စုတ် ကိုချောင်ထိုး
ရစ်ပတ်တတ်တဲ့ သံယောဇဉ် နဲ့ ပူလောင်လွန်းတဲ့ ချစ်ခြင်းကြားမှာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လောင်ကျွမ်းလို့ လောင်ကျွမ်းမှန်းမသိလိုက်
သံသယ များများ ထည့်လို့
တမ်းတမိပါရဲ့ အချစ်တွေ ပိုပိုလျှံလျှံ ဖိတ်စင်ခဲ့တဲ့
at 4:00 PM 10 comments
တစ်ကိုယ်တည်းသမားအတွက် ကျနော်လို လူပျိုမသိုးတသိုးလေးတွေအတွက်တော့ အဖော်ပြုစရာသီချင်းတွေပဲရှိပါတယ်။ သီချင်းကတော့ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် နားထောင်နေတာပါပဲ စိတ်ညစ်လည်း နားထောင်တယ် ပျော်လည်းနားထောင်တယ် ။ သီချင်းဆိုတတ်သလားဆိုတော့ “ ဟွန် ဟွန်း ဟွန်” ပဲ သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးရတာဆိုလို့ တစ်ပုဒ်မှကိုမရှိပါဘူး ကိုယ့်အသံက လအော့ လအယ် မွန်+ကရင်+ဗမာ+ထိုင်း ဆိုတော့ အသံက ပြဲပြဲကြီးထင်ပါ့ ။ စကားပြောရင် ကျားလိုက်သလို မြန်မြန်ပြောတတ်ပါတယ် အဲ့တာကို ဖေ့ဘွတ်က အဆိုတော် (Yan Naing Aung) က သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက်ဆိုပါတဲ့ အဲ့တာမှသေတာပဲ စာရေးဖို့ဆို မဟုတ်တာကို အဟုတ်လုပ်ပြီး ဟိုလှည့် ဒီလှည့်ရေးလို့တတ်သေးး) သီချင်းဆိုဖို့ဆိုရင်တော့ လုံးဝမရပါ။
တလောက ရုံးက မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေ လခထုတ်တဲ့ရက် ကာရာအိုကေဆိုင်သွား သီချင်းဆိုကြတော့ သီချင်းတစ်ခါမှမဆိုဖူးတဲ့ ကျနော့်ကို အတင်းဆိုခိုင်းတာ ဘယ်သူမှရှက်စရာလူမပါပဲ ရှက်နေတဲ့ ကျနော်က သီချင်းဆိုဖို့တောင် ရဲဆေးတင်လိုက်တာ ဘီယာ ၂ ဗူး အသံကလေးလေး အရှိန်လေးရတော့ လျှာကလေးလေး ဟဲလေး ကနေ ဗြဲလေးဖြစ်သွားတယ် သူ့ ရဲ့ ဘာဖြစ်ဖြစ် က ကျနော်ဆိုလိုက်တာ ဘာဗစ်ဗစ် တဲ့ ကြားရတာ နားဝင်ဆိုလို့ထင်ပါ့ ဘေးက သူငယ်ချင်းက “ပေးပေး ကျနော်ကိုပဲပေးတော့” တဲ့ အော် ငါ့နှယ် ပါရမီ မပါလိုက်ပုံများ မကျေနပ်ဘူး အိမ်သာထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းပြန်ကျင့်ရမယ် အသံ ။
သီချင်းကဆိုတာ စာမေးပွဲမှာ မရတဲ့နေရာကျ ကျော်တုတ်သွားသလိုပဲ “ သူဟာ ကျနော့်၇ဲ့ အိပ်မက်တွေထဲမှာ.............. အိပ်မက်ဟာ တကယ်ဖြစ်မလာပါ ” အစကနေ အဆုံးတစ်ခါတည်းရောက်သွားတယ် အိပ်မက်က မက်လို့တောင်မပြီးသေး တကယ်မဖြစ်လာတာက အတိကျ ကြားထဲမှာ ကျနော်ဆိုသွားတဲ့ စာသားတွေက “ ဟွန် ဟွန်း ဟွန်” ။ရှားရှားပါးပါး ကိုယ်ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ထဲရှိပါတယ် “my love” တစ်ယောက်သောသူကို အဲ့သီချင်းလေးဆိုပြဖူးပါတယ် ကိုယ့်အသံကိုမှတ်ချက်ချလိုက်တာ “ ဘာမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူး” တဲ့ အဲ့လိုတော်ချက် ။ ထိုင်းသီချင်းတွေ မပီ့တပီနဲ့လိုက်ဆိုတော့ ရုံးက သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဟာသကြီးကိုဖြစ်လို့ ဟူလားကျိုင် = I Love You ,ဟူမီးကျိုင် = I Miss You အဲ့တာ ၂ လုံးပဲပီတယ် အပိုင်ကိုကျက်ထားတာ ဟဲဟဲ ။
ခုရက်ပိုင်း နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် ထိုင်းက နာမည်အကြီးဆုံးအဆိုင်တော် ကိုငှက် ( ထုံချိုင်း ) ရဲ့ သီချင်းလေး သူကတော့ အမြဲတမ်း လန်းဆန်းတုန်း ချောတုန်း သန်တုန်းမြန်တုန်းပဲ ။ နားထောင်ကြည့်ပါအုံး ကျနော်ကတော့ “ ဟွန် ဟွန်း ဟွန်” နဲ့ ပဲ ဒီသီချင်းကို လိုက်ဆိုနေလိုက်တာ ဟုတ်လို့း)
at 12:15 PM 11 comments
ရင်ဘတ်မှာက ဖုတ်မြေတွေ အလိမ့်လိမ့်တတ်
ကဲ... မောင်မျိုးရေ... ညီလေးရေ...
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မမြင်နိုင်တဲ့ ရှု့ထောင့်ကနေ ကိုယ့်အတွက်ရင်ဘတ်တူသူတွေရေးပေးတဲ့စာ ။ ဒီကဗျာကတော့ သူငယ်ချင်း လွမ်းလုင် ရဲ့ ၂၀၀၈ ၊ ၁ လပိုင်းတုန်းက ကျနော့်အတွက်ရေးပေးတဲ့ ကဗျာလေး ခုတော့ သူလည်း ဘယ်ဆီရောက်လို့နေလဲမသိပါ ။အချိန်တန်တော့လည်း ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက် ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်ကျောင်း တွေ့ဆုံတုန်းခဏ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အမှတ်တရလေးတွေပဲ ချန်ခဲ့ချင်တယ် ဒါပေမယ့်လည်း...................။